İmamoğlu'ndan, Wasiirka Çavuşoğlu'nun oo ka Jawaaba Channel Channel Comment | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 Istanbulİmamoğlu'ndan, Wasiirka Çavuşoğlu'nun Channel Istanbul Ayaa Ka Jawaabaya Faalada
Kusoo jawaab cavusoglun kanaalka istanbul tafsiir
Khudbadiisa kadib “Dhulgariirka Dhulgariirka İ, İBB Madaxweynaha Ekrem İmamoğlu wuxuu kaga jawaabay su’aalaha suxufiyiinta. Imamoglu, Wasiirka Arimaha Dibada Mevlut Cavusoglu "Channel Istanbul, isaga oo tixraacaya" qoditaanka qodida wuxuu ku duuli doonaa bada, "ayuu ku jawaabay.
Emamoglu wuxuu carrabka ku adkeeyay in dadka reer Istanbul ay leeyihiin macluumaad asdanda eber ah Kanal oo ku saabsan Canal Istanbul wuxuuna yiri “Waxaan hoosta ka xariiqaynaa inuu jiro hanaan saameyn ku yeelan doona adduunka, deegaanka, jawiga iyo dhulgariirka dhinac kasta, oo saameyn ku yeelan kara dadka iyo dhismaha qaab dhismeedka. Uma daneeyo meesha Wasiirka Arimaha Dibada, Arimaha Dibada ama arrimo kale. Waxaan fiirinayaa Istanbul, 16 milyan oo qof, waxa dalkani ku kici doono. ”
Dowlada Hoose ee Magaalada Istanbul (IMM) Madaxweynaha Ekrem Imamoglu, "Aqoon-isweydaarsi Dhulgariir" kadib khudbadii uu ka soo horjeeday kaamirooyinka hortiisa. Su’aalaha ay weydiiyeen suxufiyiinta Imamoglu iyo jawaabihii uu siiyay Madaxweynaha IMM waxay ahaayeen sida soo socota:
Waxaa jiray magacyo ku jira borotokoolka ay indhuhu raadinayeen; Guddoomiyaha Magaalada Istanbul wuxuu ku dhow yahay inuu noqdo Madaxweynaha AFAD. Qof walba oo halkan jooga waa lagu casuumay, anigoo ah aqoontayda. Laga soo bilaabo wasaarada ay khusayso ilaa gudoomiyaha. Waxaa laga yaabaa in qof u yimid inuu matalo goleyaasha ama ergada; laakiin garan maayo cidda timid, si cad uma uusan imaan. Waxaan rajeynayaa inay halkaan joogaan. Maanta maaddada, saynisyahannada sarsare, dadka farsamada, waxa ay ku dari doonaan. Waxaan nahay dadka u baahan inay dhagaystaan ​​maamulayaasha mas'uuliyadana iska saaraan. Xitaa haddii aysan imaan, waxaan u direynaa warbixinnada.
“WAAN KU FARAXSANAHAY”
Waxaad sidoo kale xustay kanaalka Istanbul. Siyaasadu sidoo kale ajandaha ayey ku jirtaa. Wasiirka arrimaha dibedda Mevlut Cavusoglu, “waqtiga aan ku dhufanno qoditaanka waxay ku duuli doontaa badda,” ereyadaas ayuu lahaa. Mowqifkaagu wuu sii socdaa. Aaway mashruuca Kanal Istanbul? Sababtoo ah, garabka xukunka ayaa go'aaminaya kuna adkaysanaya arrintan.
Daraasaddeena, waxaan ku aragnaa in dadka ku nool Istanbul ay macluumaad ku dhow yihiin eber. Channel Istanbul, 'mashruuc waalan', 'kanaal maraya' way ogyihiin. Si kale haddii loo dhigo, ma hayaan macluumaad ku saabsan saameynta, waxyeelada ay soo saari doonto, faa'iidooyinka iyo faa'iido darrooyinka waxa ay ku kici doonto. Waxaan carrabka ku adkeynay in maaddo saameyn ku yeelan doonta adduunka, deegaanka, jawiga, dhulgariirka dhinackasta oo saameyn ku yeelan kara dadka iyo dhismuhu waa siyaado, waxaana hoosta ka xariiqay in aysan aheyn hannaan la dhihi karo markii aan u nimid jilitaanka '. Uma daneeyo meesha Wasiirka Arimaha Dibada, Arimaha Dibada ama arrimo kale. Waxaan eegay Istanbul, dad gaaraya 16 milyan, waxa dalkan ku kici doona. Markaa tan waxaa laga yaabaa 75 bilyan, laga yaabee 125 bilyan ginni waa la sharraxay. kharashka noocan oo kale ah, waa wixii u dhigma dhaqaale ee Turkey ayaa mudnaanta maanta? Waa maxay saameynta magaaladan ku leedahay juqraafi ahaan taariikhdeed iyo taariikhdeeda hore? Waa maxay saamayntu meelaha beeraha ama kaymaha? Waa maxay saameynta nolosha aadanaha, taraafikada iyo jiritaanka juqraafi ahaan? Waan daryeelayaa taas. Taasi waa waxa aniga i xiiseeya. Waan sii wadayaa inaan shaaciyo, la wadaago oo aan wada hadlo.
Way fiicantahay… ”
Waa maxay xaaladdi ugu dambeysay ee biyo-xireennada? Miyay jiri doonaan biyo yaraanta ka jirta Istanbul? Waqtigaan la joogo, biyo-xireennadayadu waxay ka badan yihiin boqolkiiba 36 deganaanshaha. Heerka deganaanshaha, oo ku jiray hoos u dhac hoose usbuucyo, ayaa bilaabay inuu kaco maalmihii ugu dambeeyay ee 3-4. Isku daygeenii qaboobaha ayaa dib u dhacay; laakiin wali ma aan la soo arag jiilaalka. Xaaladda biyaha eerie ee Istanbul, 2, waxay la xiriirtaa sannadihii abaarta. Waxaan arki doonaa sida abaartani saameyn ugu yeelan doonto xeryaha xagaaga. Way adag tahay in la saadaaliyo xilliga qaboobaha weli. Haddii ay jirto abaar sannadka dambe, biyo yaraan ayaa naga sugeysa 2021, aragtida asxaabteena. Dabcan waxaa jira wax 2 ah oo halkan ka muuqda. Midkood waa sababta mashruuca taariikhiga ah ee Melen Dam loo furi doono 2 sano ka hor iyo in Istanbul lagu bixin karo malaayiin mitir cubic oo kayd biyo ah ayaa weli ah natiijada bil. … 2040 waxaa lasiiyay dammaanad bulshada in aan la wareegnay magaalo aan dhibaato biyo la aan ku heysan doonin illaa 2071, oo uu ku jiro Mudane Madaxweyne. Waxaa nalagu doortay anagoo qaadanay dammaanaddaas. Sidaa darteed, howshani waa mid qaran. Haddii DSI ay dhibaato ka haysato dhibaato ku-meel-gaar ah, waxaan uga digayaa hay'adaha dhisi doona jaangooyadaan oo ugu yeeraynaa inay xasaasiyad muujiyaan. Tani waa arin muhiim ah. Ugu yaraan waxaan u malaynayaa in Madaxweynuhu ballanqaaday oo uu ballanqaaday “Ma haysan doonno dhibaatooyin biyo ah illaa 2040, 2071. Waxaan xallinay dhibaatada oo dhan waxaanan ku casuumeynaa dhammaan hay'adaha iyo ururada inay mas'uul ka noqdaan ballanqaadka. Waqtigan xaadirka ah, 2 micnaheedu maahan inaysan jiri doonin dhibaatooyin biyo mustaqbalka, sida aan filayno inaysan jiri doonin dhibaatooyin biyo ah sanadka. Ka sokow dhibaatada daran ee Melen Dam, mashruucyadeenna kaydinta iyo horumarinta kheyraadka biyaha ayaa sii socda. Waxaan qaban doonnaa aqoon-isweydaarsiga biyaha bisha Janaayo. Halkaas ayaan ku geynaynaa. Laakiin marka ugu horreysa, ha noo caddeeyo arrintaas; Xaqiiqda ah in mashruuca Kanal Istanbul uu burburin doono barkadaha biyaha ee ku xeeran 30 waa caddeyn kale oo muujineysa sida aan loo baahnayn oo ay qatarta ugu tahay Istanbul. Aynu hoosta ka xariiqno.
WAA INAAN AAN U XAAHAN KU SAAMEYNAYO MEELAHA SAYLANKA '
Qaar ka mid ah dadka muddo dheer ka shaqeynayay aagga dhulgariirku waxay ka jawaabeen warbaahinta bulshada oo ku saabsan sababta aan loogu darin aqoon isweydaarsiga ay soo martay maamulka IMM. Ma ka war haysaa casumaadahaan oo ma heli doontaa fariin?
Ayaa lagu casuumay maayar ahaan, oo aan ahayn… Ma lihi wax qasbi ah ama xaq uma lihi inaan ka mid noqdo qaybaha cilmiga ah. Aynu mar uun dhaho sidan. Ma jiro qof lagu casuumay. Waxay ku saabsan tahay in la hadlo. Falcelin la muujiyey… Saynisyahan magaciisa la soo sheegay ayaa sidoo kale si firfircoon ugala shaqeeya degmadeenna qaybaha kale. Tusaale ahaan, Waan ogahay in İSKİ uu u fidiyay daraasad. Sidaa darteed, ma jiro saynisyahan ku sugan Istanbul inuu banaanka joogo. Waxay noqon kartaa mid aan dhammaystirnayn. Waxaan haynaa aqoonyahano badan. Qof kasta ma noqon karo qof ku hadla. Laakiin qof walba waa inuu ku lug lahaadaa hawsha. Waxaan sameyneynaa guddiyo si loo hubiyo tan. Haddii qalad lagu galay iyaga hore ayuu saaxiibkeen ugu sheegay 'raali gelin' ayuu yidhi. Laakiin waa inuusan dooran inuu imaado sababtoo ah anigu kuma hadlin sayniska. Waxaan rajeynayaa maanta ama berrito inay iyagu iskood u noqdaan kaqeybgalayaasha heerka ugu sarreeya isla markaana la wadaaga macluumaadka ku darsada hawsha. Kaliya uma aha iyaga, dabcan, waxaan qof walba ku casuumeynaa dareenkan. Ciladaha ayaa la tirtirayaa. Tanina ma aha kii hore ama kan ugu dambeeya. Waxaan had iyo jeer ku dari doonnaa aagaga iyo howlaha aan uga hadli doonno dhulgariir noocan oo kale daqiiqad kasta oo ka dhaca Istanbul. Maxaa yeelay qodobkayaga koowaad waa dhulgariirka.
Marmaray iyo Canal Istanbul, oo ah aagga cusub ee laga soo galo waddada wadada